Himalaya Dainik » सुशान्तको मृत्युअघि दिपिकाले भनेको यो कुरा, रातारात बन्यो भाइरल (भिडियोसहित)
भारतकै सर्वाधिक पारिश्रमिक पाउने नायिका पादुकोणले लोकप्रियताको उचाइमा पुग्ने समयमा निकै संघर्ष गरेकी थिइन् । न त उनी कुनै ठूलो कलाकारको छोरी हुन् न त कलाकारितासँग नाता नै थियो । तर पनि उनी बलिउडमा सफल भइन् ।
उनको क्षमता र निर्माता/निर्देशक सञ्चय लीला भन्सालीको साथ त्यसपछि उनले कहिल्यै फर्केर हेर्नु परेको छैन । अहिले बलिउडमा नेपोटिजमको कुरा उठेर सबै कलाकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गर्न नमिल्ने बनाएका छन् ।
तर दिपिका पादुकोणको भने व्यापक चर्चा छ । उनको फ्यान फलोइङ् ह्वात्तै बढेको छ । उनको एउटा पुरानो भिडियो निकै भाइरल बनिरहेको छ । उक्त पुरानो अन्तर्वार्ता भिडियोको कारणले उनको चर्चा चुलिएको हो ।
भारतीय मिडियाले उनलाई सबैभन्दा धेरै को मनपर्छ भनेर प्रश्न गरेको थियो । उनले सहजै मलाई सुशान्त मन पर्छ भनेर जवाफ दिएकी छिन् ।
उनको हार्ड वक एकदमै मन पर्छ, दिपीका भन्छिन् ।द उनको यही लाईनले नै उनको फ्यानहरु प्रशंशा गर्दै भिडियो शेयर गरिरहेका छन् ।
यो पनि- सबैभन्दा राम्रो नाच्ने १० नेपाली नायिका
एउटा राम्रो नायिकामा अभिनय र आवाज सँगसँगै उसको नृत्य पनि राम्रो हुनु जरुरी छ । आज हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो नाच्ने १० नायिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।
१०. केकी अधिकारी
केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी निकै चर्चित र व्यस्त नायिका हुन् । उनी राम्रो अभिनय मात्र नगरेर निकै राम्रो नाच्छिन् पनि । केकी अधिकारीले डान्स गर्दा निकै राम्रो एक्सप्रेशन दिने गरेकी छिन् । जसले दर्शकलाई मोहित बनाउनछ ।
९. रेखा थापा
८. जसिता गुरुङ
जसिता गुरुङ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएको धेरै समय भएको छैन । तर उनको फ्यान फलोइङ भने निकै राम्रो रहेको छ । जसिता गुरुङ पनि राम्रो नाच्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् ।
साम्राज्ञी निकै राम्रो नाच्छिन् । उनको एक्सपेशनले सबैलाई भुतु क्कै बनाउँछ । साम्राज्ञी पनि सबै खालका डान्स गर्न सक्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् ।
स्वस्तिमा खड्काको कुरा गर्ने बित्तिकै सबैलाई सुरुमा कुटु मा कुटु गीत नै याद आउँछ । उनि कुटुमा कुटु गीतमा निकै राम्रो नाचेकी पनि थिइन् । त्यहाँ बाट नै उनले राम्रो नाच्छिन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
नायिका आँचल शर्माले थुप्रै डान्सिङ गीतहरुमा नाचिसकेकी छिन् । उनले पनि सबै खालका डान्स गर्न सक्छिन् । उनको डान्सको फ्यान धेरै छन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमाा राम्रो नाच्ने नायिकाको लिष्टमा प्रियंका कार्कीको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । उनी एक रियालिटी शो को जर्ज समेत बनिसकेकी छिन् । उनले हरेक प्रकारका डान्स गर्न सक्छिन् ।